भाइले गोली हाने, दाइले बचाए : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश प्रदेश ५ भाइले गोली हाने, दाइले बचाए
तुलसीपुर । सामान्य विवाद हुँदा अमिनलाई गोली हानेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ टिकरी निबासी २४ बर्षका पुर्ण वली र २१ बर्षका आकाश चौधरी रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक झलक प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
जग्गा नापजाँच गर्न गएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा ९ निबासी २४ बर्षका अमिन मिलन केसीलाई सामान्य विवाद भएपछि वलीले पेस्तोलले हानेका थिए । “जग्गा नापजाँचका लागि अमिन केसी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अश्वाराको गनारकुलामा गएका थिए । संगसंगै फित्ता पनि समाते तर विवाद भएपछि पेस्तोल ल्याएर हाने” एक प्रत्यक्षदर्शीले भने । आरोपीका आफ्नै दाइ कुमार वलीले भाइलाई समातेका कारण केसीको ज्यान जोगीएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले पेस्तोल सहित ६ वटा गोली र एउटा खोका बरामद गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार आरोपी वलीले भारतको पटनाबाट ३ महिना अघि ४० हजारमा खरिद गरेर पेस्तोल ल्याएका हुन् । घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ । जग्गा नापजाँच गर्दा मिचिएपछि विवाद भएको प्रहरीले बताएको छ । आरोपीलाई हातहतियार खरखजना सम्बन्धि मुद्दा चलाउने प्रहरीले तयारी गरेको छ ।
लन्डन । फुटबल स्टार क्रिश्चियानो रोनाल्डोलाई कोरोना पोजिटिभ भएको छ । कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दा रोनाल्डोलाई पोजिटिभ देखिएको समाचार बेलायतको डेली मेलका अनुसार उनलाई...
सुनसरी । सुनसरीको चतराधामस्थित आश्रममा महिला अनुयायी बलात्कारका अभियुक्त सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । मंगलबार बिहान १२ बजेतिर...
Breaking News ओपेन्द्र बस्नेत - December 21, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले आज अपराह्न ३ बजे देशवासीका...
बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको ९१ हजार नाघ्यो
अर्थ ओपेन्द्र बस्नेत - June 28, 2020 0
काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिर रहेको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा आज अप्रत्याशित रुपमा बढेको छ । आज बजार खुल्नेबित्तिकै छापावाल सुनको मूल्य...
राजनीति ओपेन्द्र बस्नेत - May 31, 2020 0
प्रदेश ३ ओपेन्द्र बस्नेत - March 27, 2020 0
सिन्धुपाल्चोक । चीनको बुहानमा कोरोना भाइरस (कोभीड–१९) को महामरी फैलिएपछि बन्द रहेको नेपाल चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी हुदै कोरोना परीक्षणको लागि आवश्यक सामग्री...
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको जवाफ : समस्या कालो कोटमा होइन, कालो सोचमा छ
Uncategorized राजधानी समाचारदाता - June 1, 2021 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गरेको टिप्पणीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज मंगलबार विहान जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले...
Breaking News निराजन पौडेल - May 22, 2021 0
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट...
Breaking News ओपेन्द्र बस्नेत - June 1, 2020 0
प्रदेश २ ओपेन्द्र बस्नेत - May 19, 2020 0
इटहरी । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा सामुहिक बलात्कारको शिकार भएकी एक किशोरीलाई अगुवाकै दबाबमा गाउँ निकाला गरिएको छ । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ७ बडहरा का १५...
Breaking News ओपेन्द्र बस्नेत - May 10, 2020 0
दैलेख । दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–४ मा लकडाउनका विषयमा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप भएको छ । झडपका क्रममा स्थानीयवासीले डुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले जवाफी...